Madaxwaynaha Puntland oo Garowe kula kulmey wafdiga dowlada dhexe ee Somalia – SBC
Madaxwaynaha Puntland oo Garowe kula kulmey wafdiga dowlada dhexe ee Somalia
Posted by Webmaster on February 17, 2013 Comments
Xarunta madaxtoyada Puntland ee Garowe ayaa xalay lagu qabtay casho sharaf lagu casumey Wafdigiii ka socdey DF Somalia oo aaska Shiikh Cabdiqaadir u yimid Garowe.
Kullanka casho sharafta ah ee uu madaxwayne faroole xalay laqaatay wafti uu horkacayay wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumada somaliya ayaa waxa ku wehliyay kuxigeenka Madaxweynaha Gen.Cabdisamad Cali Shire ,wasiiro ka tirsan dowladda Puntland iyo madax kale .
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amaanka Qaranka Xukumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha Puntland, iyagoo ka wada hadlay sidii loo hormarin lahaa Amaanka deegaannada Puntland.
Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dilkii loo geystay Allaha u naxariistee Sheekh C/qaadir Nuur Faarax oo shalay lagu aasay magaalada Garowe iyo sidii xal loogu heli lahaa dilalka qorsheysan ee loo gaysanyo dadka birimageydada ah.
Waxa ay sidookale ay madaxdii kulankaasi wadaqaatay ay kawada hadleen Xoojinta Xiriirka DF Somalia iyo Puntland ,iskaashiga dhinaca amaanka iyo arrimaha bulshada.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in maamulkiisu uu go’aan cad ka qaadandoono kooxaha fuliya dilalka qorsheysan ee dhaca mararka qaybtood.
Wasiirrada iyo xildhibaanada ka socda dowlada dhexe ee jooga magaalada Garowe ayaa la filayaa in ay sidookale kulamo kale oo dheeraad ah la qaataan mas’uuliyiinta maamulka Puntland markii ay dhamaasytaan kulamadoodana waxa lafilayaa inay dib ugu laabtaan muqdisho.